‘एचआइभी पोजिटिभ’ ले गरिन् मृगौला दान ! - Birgunj Sanjal‘एचआइभी पोजिटिभ’ ले गरिन् मृगौला दान ! - Birgunj Sanjal‘एचआइभी पोजिटिभ’ ले गरिन् मृगौला दान ! - Birgunj Sanjal
‘एचआइभी पोजिटिभ’ ले गरिन् मृगौला दान !
२५ भाद्र २०७६, बुधबार ०८:५८
एजेन्सी । अमेरिकाको एट्लान्टामा विश्वमै पहिलोपटक एक एचआइभी पोजिटिभ महिलाले मृगौला दान गरेकी छन् । सोमबार बाल्टिमोरस्थित जोन हाप्किन्स मेडिसिनका डाक्टरहरुले उनको मृगौला अर्की एक महिलामा प्रत्यारोपण गरेका हुन् जो पनि एचआइभी संक्रमित नै हुन् । सो शल्यक्रियापछि अहिले दुवैजना स्वस्थ अवस्थामा रहेको र नयाँ शरीरमा मृगौलाले राम्रो काम गरिरहेको बताइएको छ ।
यसरी यो ऐतिहासिक शल्यक्रिया वास्तवमै एचआइभी चिकित्सा क्षेत्र र यसको विकासमा संलगन सबै अनुसन्धानकर्मी अनि वैज्ञानिकहरुका लागि उत्सवको खबर भएको बताइएको छ ।
यसरी मृगौला दान गर्ने पहिलो एचआइभी संक्रमित ३६ वर्षीया निना मार्टिनेज पब्लिक हेल्थमा आबद्ध छिन् जो सन् १९८३ मै एचआइभी भाइरसको शिकार भएकी थिइन् । यस्तोमा आफूले दुनियाका सबैलाई एचआइभीसँग बाँच्नुको अर्थ बुझाउन चाहेको उनले बताइन् । तर एचआइभी संक्रमित भएको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि उनलाई अत्यन्तै स्वस्थ अवस्थामा देखेर चिकित्सकहरु आश्चर्यमा परेको बताइएको छ । उनका अनुसार उनले अहिलेसम्म कुनै कार किनेकी छैनन् र प्राय पैदल यात्र गर्ने गरेकी छन् भने म्याराथोनमा पनि दौडने गर्छिन् । साथै उनलाई मधुमेह लगायत कुनै अतिरिक्त रोग नभएको हुनाले पनि योग्य दानकर्ताका मानिएको बताइएको छ ।
२०१३ भन्दा अगाडिसम्म अमेरिकाले एचआइभी पोजिटिभलाई अङ्ग दान गर्ने अनुमति दिएको थिएन । यसबारेमा अस्पतालकी प्रोफेसर डाक्टर डोरी सेगेभ भन्छिन्, “हाम्रो प्रत्यारोपण सूचीमा मैले एचआइभीका धेरै बिरामीको मृत्यु भएको देखेको छु । त्यस समय हामीले जिवित र मृत दुवै सम्भावित दानकर्ताहरुलाई केबल एचआइभीकै कारण अस्वीकार गर्नु पर्दथ्यो ।”
यस्तोमा एचआइभीकै बिरामी भएपनि कतिपय व्यक्ति स्वस्थ हुने र उनीहरुसँग मृगौला दान गर्ने क्षमता हुन्छ भन्नेबारे सबैलाई सचेत गराउन चाहेको सेगेभले बताइन् । नत्र यसअघि एचआइभी दानकर्तालाई कसैले पनि योग्य नठान्ने उनको भनाइ छ ।
यसरी २०१३ को नभेम्बरमा मात्र अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धि अध्ययन गर्दा एचआइभी पोजिटिभले अर्को एचआइभी पोजिटिभलाई अङ्ग दान गर्न मिल्ने नियम ल्याइएको थियो । यसलाई एचआइभी अर्गान पोलिसी इक्वीटी, होप पनि भनिन्छ । सेगेभले पनि होप कार्यन्वयनमा मद्दत गरेकी थिइन् । तर होपका बारेमा जानकार भएपनि निनाले भने मृत एचआइभी बिरामीको अङ्ग मात्र दान गर्न पाइने ठानेकी थिइन् । जोन होप्किन्सकै चिकित्सकहरुले २०१६ मा यस किसिमको पहिलो शल्यक्रिया गरेका थिए जसमा मृत दानकर्ताले जिवित एचआइभी संक्रमितलाई अङ्ग दान गरेका थिए ।
हाल अमेरिकामा १० लाख भन्दा बढी मानिस एचआइभी संक्रामित छन् । त्यसैले पनि यो ऐतिहासिक शल्यक्रियाले विश्वभरका बिरामीका लागि उपचारको नयाँ बाटो खुलाएको बताइएको छ । निना पनि आफ्नो कथाले सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहन्छिन् । सीएनएन